Levitikọs 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 “‘Ọ bụrụ na mkpụrụ obi achọọ ịchụrụ Jehova àjà ọka,*+ àjà ya kwesịrị ịbụ ntụ ọka e gwere nke ọma;+ ọ ga-awụkwa ya mmanụ ma tụkwasị frankinsens n’elu ya. 2 Ọ ga-ebutere ya ụmụ Erọn bụ́ ndị nchụàjà, onye nchụàjà ga-ekpoju ntụ ọka ahụ e gwere nke ọma ọbụ aka ya, tinyere mmanụ ya na frankinsens ya dum; ọ ga-esure ya n’ọkụ n’ebe ịchụàjà ka ọ bụrụ ihe ncheta ya,+ dị ka àjà na-esi ísì ụtọ nke a na-esurere Jehova n’ọkụ. 3 Ihe fọdụrụ n’àjà ọka ahụ ga-abụ nke Erọn na ụmụ ya,+ dị ka ihe kasị nsọ+ nke si n’àjà a na-esurere Jehova n’ọkụ. 4 “‘Ọ bụrụ na àjà ị ga-achụ bụ àjà ọka n’ụdị achịcha e ghere n’ekwú, ọ ga-abụ nke e ji ntụ ọka e gwere nke ọma mee, achịcha na-ekoghị eko+ nke a gwara mmanụ ma ọ bụ achịcha dị fere fere na-ekoghị eko+ nke e tere mmanụ.+ 5 “‘Ọ bụrụ na àjà ị ga-achụ bụ àjà ọka nke e ji ite dị mbadamba ghee,+ ọ ga-abụ nke e ji ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, ghee, ọ ga-abụ nke na-ekoghị eko. 6 A ga-anyawasị ya iberibe iberibe, ị ga-awụkwa ya mmanụ.+ Ọ bụ àjà ọka. 7 “‘Ọ bụrụ na àjà ị ga-achụ bụ àjà ọka nke e ji mmanụ ghee n’ime ite nwere afọ, ọ ga-abụ nke e ji ntụ ọka e gwere nke ọma na mmanụ mee. 8 Ị ga-ewetara Jehova àjà ọka e ji ihe ndị a mee; a ga-enye ya onye nchụàjà, ọ ga-ewetakwa ya nso n’ebe ịchụàjà. 9 Onye nchụàjà ga-ekporo ụfọdụ n’ime àjà ọka ahụ ka ọ bụrụ ihe ncheta ya,+ ọ ga-esurekwa ya n’ọkụ n’ebe ịchụàjà, dị ka àjà na-esi ísì ụtọ nke a na-esurere Jehova n’ọkụ.+ 10 Ihe fọdụrụ n’àjà ọka ahụ ga-abụ nke Erọn na ụmụ ya, dị ka ihe kasị nsọ n’àjà a na-esurere Jehova n’ọkụ.+ 11 “‘Ọ dịghị àjà ọka unu ga-enye Jehova nke a ga-eme ka o koo eko,+ n’ihi na unu agaghị ewere ihe ọ bụla e tinyere ihe na-eko achịcha nakwa mmanụ aṅụ suree n’ọkụ ka ọ bụrụ àjà a na-esurere Jehova n’ọkụ. 12 “‘Unu ga-achụrụ ha Jehova n’àjà dị ka mkpụrụ mbụ,+ a gaghịkwa eweta ha n’elu ebe ịchụàjà ka ha bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ. 13 “‘Ị ga-etinye nnu n’àjà gị ọ bụla bụ́ àjà ọka;+ ekwela ka nnu nke ọgbụgba ndụ+ Chineke gị kọọ ụkọ n’àjà ọka gị. Mgbe ị na-eweta ihe ọ bụla ị chọrọ ịchụ n’àjà, wetakọta ya na nnu. 14 “‘Ọ bụrụ na ọ bụ àjà ọka nke si ná mkpụrụ mbụ kara aka ka ị ga-enye Jehova, ị ga-enye oko ọka na-akpọbeghị akpọ nke a hụrụ n’ọkụ, ọka ọhụrụ a kụjasịrị akụjasị, dị ka àjà ọka nke si ná mkpụrụ mbụ gị kara aka.+ 15 Ị ga-awụ mmanụ n’elu ya ma tụkwasị frankinsens n’elu ya. Ọ bụ àjà ọka.+ 16 Onye nchụàjà ga-esure ihe ncheta ya n’ọkụ,+ ya bụ, ụfọdụ n’ime ọka ahụ a kụjasịrị akụjasị na mmanụ, ya na frankinsens ya dum, dị ka àjà a na-esurere Jehova n’ọkụ.